Somaliland: Aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen Oo La sheegay Inuu Toddobaadkan Ku Biiri Doono Xisbiga KULMIYE - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen Oo La sheegay Inuu Toddobaadkan Ku Biiri...
Qoraal kooban oo uu murrashax Jamaal Cali Xuseen soo saaray, ayuu wararkaas ku beeniyey, balse waxa uu qiray inay toddobaadkan maanta bilowga ah shaacin doonaan meesha ay ku fureen geeddigoodii siyaasadeed,
“Waxaan ku wargelinayaa warbaahinta in aanay qaadan wararka aan salka iyo raadka toona lahayn ee ay websites-ka qaarkood qorayaan ee sheegaya inaanu go’aan qaadanay oo xisbi hebel lagu biiray. Fadlan taageerayaasha, asxaabta iyo shacabkaba waxaanu ku wargelinaynaa in wax go’aan ah oo la qaatay aanay jirin,” ayuu yidhi Jamaal Cali Xuseen.
Isaga oo caddaynay Jamaal inay toddobaadkan bulshada si rasmi ah ugu soo bandhigi doonaan meesha ay iskugu lugo duwadeen, ayaa waxa uu yidhi,
“In Sha Allaah, toddobaadka soo socda ayaanu hawshaasi iska soo gabogabeyn doonaa. Dadkan beenta qaawan iska qorayana waxaanu leenahay fadlan ummadda runta u qora, waxyaabo badan oo kale oo mudnaan leh oo in laga hadlo ay tahay ayaa waddanka ka jiree. Ilaahay kheyr ha inooga dhigo dalkeena iyo dadkeena,” ayuu yidhi Jamaal Cali Xuseen.
Warar hoose la xidhiidha go’aanka uu qaatay aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen, ayaa wargeyska Hubaal u xaqiijiyey inuu ku qancay ku biiritaanka xisbiga talada haya ee KULMIYE, isla-markaana meel la isla dhigay arrimo badan oo is-faham iyo is afgarasho lagu dhammeeyey.